व्यवस्था (धार्मिक / आफ्नै cleverness) भन्छन् - के। येशू &
के तपाईं येशू विश्वास गर्दा के बारेमा, तर प्रत्यक्ष छ। परमेश्वरको आत्मा जीवन तपाईं मार्फत प्रवाह हुनेछ र जीवन हामीलाई पनि व्यवस्था माग बढि बनाउँछ। त्यहाँ एक प्रशस्त जीवन छ।
व्यवस्था (धार्मिक / आफ्नै cleverness) भन्छन् - के। येशू भन्नुहुन्छ - मेड।
व्यवस्था, धर्म र आफ्नै cleverness (एक समय को लागि यो सबै सँगै राख्न व्यवस्थापन गर्दा हामी) गर्व हामीलाई बनाउँछ। तर हामी येशूको सबै महिमा मुक्तिको मतलब। हामी कृतज्ञ र नम्र छन्। धार्मिक मानिसहरू हुन् दुवै सबैभन्दा गर्व (सफल हुँदा) र सबैभन्दा उदास (तिनीहरूले खसेको छ जब छोटो)। त्यसपछि त्यहाँ पनि थिएटर व्यापार गर्न भन्दा गएका छन् जो धार्मिक कपटीहरू छ। तर एक सुरक्षित मानिस कृतज्ञ छ र आफ्नो प्यारो येशूले चाहन्छौं।
कि मुक्तिको बाँच्न तपाईं पहिले नै प्रेम किनभने, कृतज्ञताले राम्रो सामान गर्न छ।
रोमी 10: 2-4: "ख्रीष्ट पूरा छ म तिनीहरू आफ्नै धार्मिकता स्थापना गर्न प्रयास बिना, परमेश्वरको धार्मिकता बुझ्न लागि छैन र परमेश्वरको धार्मिकता गर्न अधीनस्थ छ तिनीहरूले परमेश्वरको लागि जोस छ, तर अन्तरदृष्टि अभाव कि पुष्टि गर्न सक्छौं।। विश्वास गर्ने सबैलाई धार्मिकताको। "
के तपाईं येशू विश्वास गर्दा के बारेमा, तर प्रत्यक्ष छ। परमेश्वरको आत्मा जीवन तपाईं मार्फत प्रवाह हुनेछ र जीवन हामीलाई पनि व्यवस्था माग बढि बनाउँछ। त्यहाँ एक प्रशस्त जीवन छ। येशूले कमजोर, तर ताकत र जीवनको पूर्ण छैन। उहाँले आफ्नो चिन्ह हाम्रो जीवन मा, लागि राम्रो हामी सिक्न र उसलाई कर्ण लिन गरौं जब राख्छ। हामी हाम्रो व्यक्तित्व गुमाउनु र एक रोबोट बन्न छैन। बरु, हामी आफूलाई परमेश्वरको मा फेला पार्न र अब येशूको अगाडि हिंड्न सक्छौं। हामी अब एक्लै छैनन्।
जब त पाप दस्तक?
यसलाई खुला छोड्न! तपाईं सबै अब येशूको पछि बाँचिरहेका छौं। येशूको जीवन पाप उल्टी र माटो फर्केर जान पनि राम्रो छ।
2Pe 2:22: "तर यो भन्दै यति साँचो भनाइ रूपमा तिनीहरूलाई भयो छ।: यसको उल्टी एउटा कुकुर लाभ, र एक दलदल मा wallowing गर्न धोए"
अन्यसँग सट्टा येशू आफ्नो पैदल र शेयर जारी। येशूले अद्भुत छ।
परमेश्वरले तपाईंलाई आशिष!
Vecka 19, söndag 16 maj 2021 kl. 17:47